पुनःप्राप्ति फ्लैश ड्राइवहरू
सबैभन्दा सजिलो पोर्टेबल डेटा भण्डारण उपकरणहरू मध्ये एक हुनाले तपाईंलाई सबै प्रकारका फाइलहरू एक कम्प्युटरबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ, यूएसबी फ्लैश ड्राइव डेटा हस्तान्तरणको मुख्य स्रोतहरू मध्ये एक हो । यो सजिलै संग कुनै पनि प्रणालीसँग जोडिएको हुन सक्छ जुन USB पोर्ट छ। तिनीहरूलाई भण्डारण गरिएका डाटाहरूमा छिटो पहुँचको कारण, फ्ल्यास ड्राइभहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर तिनीहरूसँग महत्त्वपूर्ण हानि छ - तिनीहरू डेटा हानिको प्रत्याशित छन्। यो आकस्मिक मेटाउने, फाईल भ्रष्टाचार, डिस्क ढाँचा, भाइरस आक्रमण र यति परिणामको रूपमा देखा पर्न सक्छ।
धेरै मानिसहरूले फाईलहरूको आकस्मिक मेटाउने परिणामको रूपमा डाटा गुमाउँछन्। के यस अवस्थामा फ्लैश ड्राइव पुनर्स्थापना गर्न सम्भव छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, यी उद्देश्यका लागि एक विशेष सफ्टवेयर हो - हटाउनुहोस्। यो प्रोग्रामले क्षतिग्रस्त फ्लैश ड्राइवमा डाटा रिकभरी गर्न मद्दत गर्दछ र मेटाईड गरिएको USB फ्लैश ड्राइभबाट मेटाईएको वा हराएको फाइलहरू पुनःप्राप्त गर्दछ।
अर्को राम्रो समान कार्यक्रम जसले फ्लैश ड्राइव - BadCopy प्रो पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ। यसले फ्लैश ड्राइवबाट डेटा र फाइलहरू पुनःप्राप्त गर्न सक्दछ। यो कार्यक्रम माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्लेटफार्म प्लेटफर्ममा (Windows 9x देखि विस्टा सम्म) मा चलाउँछ र यो प्रयोग गर्न सजिलो छ। यसको साथ, तपाईं मेटाईएको फाईलहरू पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ, डिस्क ढाँचा गर्नुहोस्, वा पूर्ण फ्ल्यास ड्राइभ रिकभरी गर्नुहोस्। यो एक पुरा तरिकाले सुरक्षित प्रोग्राम हो जसले तपाईंको फ्लैश ड्राइवमा सञ्चालनहरू पढ्दछ र बरामद फाइलहरूलाई निर्दिष्ट स्थानमा बचत गर्दछ।
त्यस्ता समस्याहरू छन् जब फ्लैश ड्राइवमा फाइलहरू क्षतिग्रस्त हुन सुरु हुन्छ, प्रणालीगत रूपमा गायब हुन्छ वा यसको भोल्युम घटाउनुहोस्। दुर्भाग्यवश, CHKDSK, स्क्यान्डिस र उपकरण जस्तै उपकरणहरू अविश्वसनीय छन् जब त्रुटिहरूको लागि फ्लैश ड्राइव स्क्यान गर्न आउनेछ; तिनीहरूको कामको सिद्धान्त हार्ड डिस्कको जस्तो होइन।
यदि तपाइँ यी प्रोग्रामहरू प्रयोग गरेर फ्लैश ड्राइव पुनर्स्थापित गर्न सक्नुहुन्न भने, ढाँचामा प्रयास गर्नुहोस्। यसले मिडियाबाट सबै चीज हटाउँछ र नयाँ फाईल आवंटन तालिका (FAT) सिर्जना गर्दछ। यस अवस्थामा, यदि फ्लैश ड्राइवमा कुनै पनि खराब क्षेत्रहरू छन् भने तिनीहरू हटाइनेछन्। यसले यसको मेमोरी क्षमता कम गर्नेछ। तर यो राम्रो छ कि एक उच्च मेमोरी भन्दा कम मेमोरी क्षमता छ, तर काम गरिन सक्दैन!
त्यस्ता अवस्थाहरू छन् जुन यो हुन सक्दैन (कम्प्यूटर द्वारा फ्लैश ड्राइव फेला परेन)। यसले माइक्रोकोयरकोटमा असफलताको संकेत गर्दछ। त्यहाँ एउटा अझै अर्को तरिका हो - फर्मवेयर। फ्लैश ड्राइव कसरी फ्लैश गर्ने? यो गर्न, तपाइँलाई विशेष कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ। पहिले तपाईंलाई फ्लैश ड्राइव चिपको मोडेल थाहा छ। यसले प्रोग्रामहरू मद्दत गर्नेछ: चेकडिस्क, यूएसबीआईडीचेक, USB भिजुअल वा ChipGenius। त्यस पछि, तपाईंले आफ्नो फ्लैश ड्राइव को फर्मवेयर प्रदर्शन गर्न को लागी एक कार्यक्रम को खोज गर्न जरूरी छ। यो इन्टरनेटमा विशेष डाटाबेसमा छ। कार्यक्रमको निर्देशन अनुसार सबै आवश्यक चरणहरू डाउनलोड र पछ्याउनुहोस्। त्यस पछि, तपाईं USB फ्लैश ड्राइव ढाँचा गर्न सक्नुहुन्छ ।
एक नियमको रूपमा, माथि उल्लेखित कार्यहरू फ्लैश ड्राइवहरू पुनःस्थापना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले स्क्रिप्टमा USB- मिडिया पठाउन नसक्नुहोस्।
र डेटा हानिबाट बच्न, फ्लैश ड्राइवलाई क्षति पुर्याउनुहोस् निम्न सरल नियमहरू पछ्याउने प्रयास गर्नुहोस्:
डेटा हस्तान्तरण गर्दा फ्लैश ड्राइव कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। यसलाई हटाउनु पहिले यसलाई रोक्नुहोस्। यो गर्नका लागि सफ सफले हटाउने हार्डवेयरमा, जुन प्रणाली ट्रेमा प्रदर्शित गरिन्छ, "USB ड्राइभ रोक्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो मात्र हेर्नुहोस् जब सम्बन्धित सन्देश देखा पर्दछ।
USB फ्लैश ड्राइवमा लिखित फाईलहरूको डुप्लिकेट छ। यदि तिनीहरूमध्ये केहि क्षतिग्रस्त छन् भने, तिनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न सम्भव हुनेछ।
डबल क्लिकको साथ फ्लैश ड्राइभ कहिल्यै नखोल्नुहोस् - यसले यसमा हानिकारक कार्यक्रमहरू सुरू गर्न सक्छ, र न केवल यसको लागी क्षतिको कारणले पनि कम्प्यूटरमा। यसैले, पहिलो दायाँ माउस बटनको साथ यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, र फाइलहरू वा फोल्डरहरूमा पहुँच खोल्न "खोल्नुहोस्" वा "अन्वेषण" बटन चयन गर्नुहोस्।
फाइलहरू खोल्न अघि भाइरसका लागि सँधै फ्लैश ड्राइवहरू स्क्यान गर्नुहोस्। यसले कम्प्युटरको भाइरसको साथ संक्रमण कम गर्नेछ। भन्न आवश्यक छैन, तपाईलाई राम्रो एंटीवायरस सफ्टवेयर प्रयोग गर्न आवश्यक छ, जुन नियमित रूपमा अपडेट गरिएको हुनुपर्छ।
यी सरल नियमहरूले फटाउनबाट बच्न मद्दत पुर्याउँदछ, पछि फ्लैश ड्राइभहरू पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक छ।
कसरी प्रोसेसरले काम गर्दछ? सञ्चालनको सिद्धान्त
NVIDIA GeForce 660 GTX Ti र Gigabyte GeForce GTX 660: समीक्षा, विवरणहरू
यी रोबोटहरू तिनीहरू के गर्दै छन् भनेर पूर्णतया सजग छन्!
कोट साइकेटिभकर को: राष्ट्रिय मनसाय र आफ्नो अर्थ
Naurskaya (चेचेन गणतन्त्र): जातीय संरचना र जनसंख्या। Naur को गाउँमा के भयो
Elma - परेलाहरु र eyebrows लागि तेल। समीक्षा, संरचना
मुख्य शीर्षक, वा के अरब देशहरूमा सर्वोच्च शासक छ
अस्पताल युमेन मा "Swallow": गुणवत्ता उपचार र सहज बाँकी
राइफल AWP: फोटो, विशेषताहरु